ဂျပန်မိဘတွေက သူတို့ကလေးတွေကို အစားဇီဇာကြောင်သူမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုသင်ပေးသလဲ? - Lifestyle Myanmar
တင်းကျပ်တဲ့ မိဘရှိသူတွေသာ နားလည်နိုင်လိမ့်မယ့် အချက် (၇)ချက်
သင်ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်တုန်းက သင့်မှာ တင်းကြပ်တဲ့ မိဘတွေ ရှိသလား? ရှိခဲ့ရင် ငယ်စဉ်ကတည်းက သူတို့ရဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းမှုအပေါ် သင်ဘယ်လို တုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ? အခုကော သင့်ကို လွှမ်းမိုးနေတုန်းလား? ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ပြောရရင် ကျွန်မတို့ မိဘတွေက အရမ်းတင်းကြပ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက...
ကလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းက ဘာကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တာလဲ?
လူတွေမှာ မွေးဖွားလာကတည်းက ရွေးချယ်စရာများစွာပါလာကြပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရည်နေထိုင်မလား? ဆက်ဆံရေးတစ်ခုထဲကို ခုန်ဆင်းမလား? အိမ်ထောင်ပြုမလား ဒါမှမဟုတ် အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးပဲလုပ်မလား? အကယ်၍ အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင်ရော ကလေးယူမလား? (သို့) မယူဘူးလား? ဒီလိုရွေးချယ်စရာတွေများစွာထဲကမှ ကလေးမွေးဖွားဖို့ဆိုတဲ့ ရွေးချယ်မှုဟာ သင့်ဘဝရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအပေါ်...